Nkọwapụta Ọnọdụ Ọnọdụ Eindhoven | Law & More B.V.
Descriptionzọ Nkọwapụta Ọnọdụ Eindhoven
Law & More di na “Ebe Eji Ejima” n’ogige ulo akwukwo Mahadum Eindhoven. N'oge ọrụ ọfịs, ị nwere ike ịga n'ụlọ nnabata nke dị n'akụkụ ụlọ “De Catalyst”. Na mpụga ọrụ ọfịs nkịtị, biko kpọtụrụ anyị na ekwentị na mbata.
Site na ụgbọ
Mara: Ọ bụrụ na iji usoro ịnya ụgbọ mmiri, banye na mpụta nke "De Lismortel" na "Horsten". Site na ebe a, ị nwere ike ịchọta ụlọ 'De Catalyst' n'aka nri. Adreesị “De Catalyst” bụ “De Lismortel 31”, Maka De Catalyst enwere kọlụm ọnụ ọgụgụ ụlọ ahụ nọmba 76 na 77.
Site na A2 site na Den Bosch:
Site na A2 / N2, na etiti Ekkersweijer, buru A58 n'ụzọ Son en Breugel.
Mgbe 3.9 gasị tụgharịrị aka nri na John F. Kennedylaan na uzo Eindhoven Centrum.
N'ebe ụzọ mgbapụ na mgbanaka ahụ dị, tụgharịa aka ekpe n'akụkụ aka Helmond.
Tụgharịa aka nri na ọkụ okporo ụzọ (n'ihu ọdụ ụgbọ mmiri Texaco).
Gaa n'ọnụ ụzọ ọnụahịa ịkwụ ụgwọ nke TU / e.
Na ntụgharị T-junction n'aka nri De De Lismortel (ya mere, atụgharịla aka ekpe na ntụpọ nke De Zaale).
Na ntụgharị ọzọ na-esote tụgharịa ọzọ na njedebe nke ụzọ gaa n'aka nri ebe ị ga-ahụ ebe Eji Ejima Ibe ya; n'akụkụ ọzọ n'ọnụ ụzọ bụ ogige ụgbọala anyị.
Site na A2 site na Maastricht ma obu site na A67 site na Venlo ma obu Antwerp:
N'ebe mgbatị Leenderheide, buru ụzọ Eindhoven, Centrum / Tongelre.
You ga abanye Eindhoven. Nọgide na-aga n'ihu na ọkụ okporo ụzọ nke abụọ (ebe ụzọ gafere na mgbanaka ahụ) na-aga Nijmegen / Den Bosch (Piuslaan). Nọgide na-agbaso ntụziaka a (n'elu ọwa mmiri, n'okpuru okporo ụzọ ụgbọ oloko).
Na gburugburu agba nke abụọ na - eso ụzọ ọpụpụ (Insulindelaan).
Tụgharịa aka ekpe na ọkụ okporo ụzọ (n'ihu ọdụ ụgbọ mmiri Texaco).
Site na A58 si Tilburg:
N'ebe ngọngọ Batadorp ga-apụ ọpụpụ Randweg Eindhoven Noord / Centrum na ebe Ekkersweijer siri dị na mpụga ọpụpụ Randweg Eindhoven / Centrum (tụgharịa n'aka nri na ngọngọ ahụ). Mgbe ahụ, na-agbaso ntụziaka Centrum.
Site na A50 si Nijmegen:
Mgbe ị bịarutere na Eindhoven, soro ntuziaka maka Centrum.
Mgbe 3.9 gasị tụgharịrị gaa n'aka nri John F. Kennedylaan na uzo Eindhoven Centrum.
Site na A270 site na Helmond:
Na ọkụ okporo ụzọ nke abụọ na Eindhoven, tụgharịa aka nri n'akụkụ agba, ntụgharị mgbanaka / Mahadum / Den Bosch / Tilburg.
Site na Transportgbọ njem Ọha
Eindhoven University of Technology dị mfe ịnweta. Universitylọ mahadum niile dị nso na ọdụ ụgbọ oloko dị na Eindhoven. Na maapụ nke ngalaba mahadum ahụ, egosiputara Twinning Center dị ka TCE.
Gbadaa na steepụ ikpo okwu, tụgharịzie gaa ọpụpụ nke dị n'akụkụ ugwu (ọdụ ụgbọ ala), ndị Kennedyplein.
Nwere ike ịhụ ụlọ mahadum n'aka nri, obere oge ole na ole ịpụ. Egwuregwu Twinning dị na njedebe nke saịtị TU (anya dị ihe dị ka nkeji 15). Soro akara ngosi odo na “De Lismortel”.